समाचार प्रदेशमै पहिलो गीत रेकडिङ्ग स्टुडियो
सुर्खेत, १६ फागुन (जागरण) । प्रदेश नम्बर ६ को सम्भावित राजधानी सुर्खेतमा पहिलो पटक गीत रेकडिङ्ग स्टुडियो सञ्चालनमा आएको छ । वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश नंम्बर ६ कै पहिलो अत्याधुनिक प्रबिधियुक्त गित रेकर्डिङ स्टुडियो संचालनमा आएको हो ।
यस क्षेत्रमा रहेका मौलिक कला र... सुर्खेतमा पहिलो पटक मिस सुर्खेत २०१७ सञ्चालन
सुर्खेत, ९ माघ (जागरण) । सुर्खेतमा पहिलो पटक मिस सुर्खेत २०१७ सञ्चालन भएको छ । व्यक्तित्व विकास गर्दै मोडलिङ्गको ज्ञान दिन र सामाजिक सोच परिवर्तन गर्ने भन्दै मिस सुर्खेत शुरु भएको हो ।
शुत्र मोडलिङ्ग एण्ड आर्ट क्रियसन वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको आयोजनामा मिस... नेपाली लोक संस्कृती जोगाउने मेरो पहिलो काम हुनेछः कलाकार टोपेन्द्र खड्का
सुर्खेत, २८ पुष (जागरण) । टोपेन्द्र खड्का भन्न वित्तीकै तपाईले सुनीरहनुभएको एउटा नयाँ नाम हो । जुन नाम अहिले परिचित हुदै गइरहेको छ । यो नाम यसरी परिचित भएको हो की ? उहाले करिव ५ वटा गितको शब्द संकलन गरिसक्नुभएको छ भने अरु १० वटा गितको शब्द संकलनको तयारीमा... बजारमा, नाँचिदेऊ...(भिडियो)
सुर्खेत, २२ पुस (जागरण) । नेपाली झ्याउरे लोक गीत नाँचिदेऊ रामरी बजारमा आएको छ । काँक्रेविहार मुभि हाउस वीरेन्द्रनगर सुर्खेतले आज आफ्नो युट्यूव च्यानलमार्फत् नमराज शर्माको गीत नाँचिदेऊ रामरी सार्वजनिक गरेको हो ।
शर्माको शव्द संयोजनमा रहेको गीतमा खड्ग... कर्णाली एक्स्पोमा भोली को को कलाकार आउँछन् ?
सुर्खेत, २९ मंसिर (जागरण) । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जारी कर्णाली एक्स्पो २०१६, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा भोली तीन जना राष्ट्रियस्तरमा चर्चित कलाकारहरुले आफ्नो प्रस्तुती प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।
कलाकारहरु हेमन्त शर्मा, कुलेन्द्र विक र अनु गुरुंग तथा... यसरी रुवाए बद्रिले
सुर्खेत, २८ मंसिर (जागरण) । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जारी कर्णाली एक्स्पो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा यस पटक पनि जनगायक बद्रि पंगेनीको प्रस्तुतीले दर्शकहरुलाई रुवाएको छ ।
परदेशिएका छोराहरुको कथा र छोराको पखाईमा बसेका आमाहरुको पीडालाई बद्रीले आफ्नो... कर्णाली एक्स्पो २०१६ मा आज कसको प्रस्तुती ?
सुर्खेत, २८ मंसिर (जागरण) । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जारी कर्णाली एक्स्पो अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा आज विभिन्न प्रस्तुतीहरु हुने भएका छन् ।
आयोजककाअनुसार मेलामा आज बद्री पंगेनी, कृष्ण काफ्ले, जितु नेपाल, पृती आले अञ्जली ठकुरी लगायतका कलाकारहरुले... अस्थिर राजनितिक अवस्थालाई हाँस्य कलाकारले यसरी गर्छन व्यङ्य
टेकराज केसी सुर्खेत, २७ मंसिर (जागरण) । अहिलेको अस्थिर राजनितिक अवस्थाका कारण हाँस्य कलाकारिता क्षेत्रको निशानामा नेताहरु पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो राजनितिक अवस्था र नेताहरुको क्रियाकलापलाई लिएर हाँस्य कलाकारहरुले व्यङ्ग्य गर्ने गरेका हुन् । कलाकारहरुले... कर्णाली एक्सोपो २०१६ मा आज के के हुदैछन ?
सुर्खेत, २६ मंसिर (जागरण) । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जारी कर्णाली एक्स्पो अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा आज रामचन्द्र काप्mले, जुनु रिजाल, राजा राजेन्द्र, रमेशराज भट्टराई र रुपा जी.एम.ले आफ्नो प्रस्तुती प्रस्तुत गर्ने भएका छन् ।
आयोजकका अनुसार मेलामा... कर्णाली एक्स्पो व्यापार मेलामा आज कसको प्रस्तुती
सुर्खेत, २५ मंसिर (जागरण) । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जारी कर्णाली एक्स्पो अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा आज पनि विभिन्न साँस्कृतिक प्रस्तुतीहरु शुरु हुने भएका छन् । आयोजककाअनुसार सुगम संगीतका चर्चित गायक प्रमोद खरेल, लोक तथा दोहोरी गायक रामजी खाँड,... हाँस्यकलाकार भट्टराईको निधन
मोरङ्ग, २४ मंसिर (जागरण) । हाँस्य कलाकार रुद्रप्रसाद भट्टराईको ४१ वर्षको उमेरमा आज असमायिक निधन भएको छ ।
मोरङ्गको विराटनगर पोखरियास्थित आफ्नी दिदीको घरमा खाना खाएर सुतेपछि आज विहान ओछ्यानमा मृत अवस्थामा पाइएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
उहाँको निधन... विजौरामा कस्तो भयो दोहोरी प्रतियोगिता ?
सुर्खेत, २० मंसिर (जागरण) । सुर्खेतको विजौरा गाविसमा आज लैंगीक हिंसाविरुद्धको जनचेतनामूलक लोकगीत प्रतियोगिता भएको छ । प्रतियोगितामा चन्द्र नामजाली प्रथम, दुर्गा विक द्वितिय, रंग विसी तृतीय र विपना सुनाखरीले सान्तोना स्थान हात पारेका छन् । अमेरिकी सहयोग... सुभाघाट मेला जाने ? यसरी व्यवस्थित गरिँदैछ
सुर्खेत, ५ मंसिर (जागरण) । सुर्खेतको मेहलकुनामा लाग्ने ऐतिहासिक शुभाघाट मेलालाई व्यवस्थित बनाइएको मेला व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष मंसिर पुर्णिमाका दिन लाग्ने मेलालाई शुभाघाट गङ्गामाला नगरपालिका सुर्खेत र महेलकुना बजार व्यवस्थापन समितीले... ठाँटी मेलामा साँस्कृतिक झाँकी देखि भलिवलसम्म
सुर्खेत, २९ कात्तिक (जागरण) । सुर्खेतको मटेला गाविसमा रहेको ठाँटी बजारमा आजदेखी ठाँटी मेला शुरु भएको छ । प्रत्येक वर्षको धान्य पुर्णीमाको दिनदेखि लाग्ने यो मेला दुई दिनसम्म चल्नेछ ।
मेलामा सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटका विभिन्न गाविसबाट साँस्कृतिक झाँकीहरु... पार्टी चल्दा चल्दै च्याप्प समातेपछि...(भिडियोसहित)
सुर्खेत, २० कात्तिक (जागरण) । सुर्खेतमा एक विशेष खुसीयाली बाँड्न आयोजना भएको पार्टीमा नाँच्दानाँच्दै केटाले केटीलाई समातिदिएपछि हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।
यसको दृश्य पनि हामी तपाईलाई देखाउँदैछौँ । साँच्चिकै पार्टी चलिरहँदा केटाले केटीलाई समातेको नभै सुर्खेतको... 1 2NextLast	सामाजिक संजाल